စိုးခိုင်ညိန်း ● ရေပွက်ပမာ – MoeMaKa Burmese News & Media
“ငါ အတွေးများလည်း မီးခိုးတွေအူ…. လေးဖက်လေးတန် အခန်းငယ်ထဲ…. ငါစောင့်စားခဲ့ရတဲ့ နေ့ရက်တို့ နံရံတွေပေါ် ဖြတ်သွား….. ဒီမျက်နှာကြက်ပေါ်ကနေ တွဲခိုနေ မီးအိမ်တစ်လုံး….. ငါ့ဘ၀အတွက် ဒီဒဏ်ရာတွေကို ကြည့်နေသလား….. ကိုယ်ခန္ဓာကြွေမှာကိုစိုး အိုး ဟိုးဟို…… နင်းထားတဲ့ ကြမ်းပြင်ကျွံသွားမလား…… ရင်ခုန်သံကို တိုးတိုးမေးကြည့် ငါ့ရဲ့ အချစ်ဘယ်မှာလဲ….. ရင်မှာ မျှော်လင့်ခြင်းရဲ့ သစ်သီးတစ်လုံး နှလုံးသားငှက်က ကိုက်ခြွေကာဖျက်ဆီးသွား….. နွေလွင်ပြင်ကို ဖြတ်ကျော် လာသူ လေညှင်းလေး အိမ်ထဲကြွပါ…… ငါ တံခါးရွက်တွေကို ဖွင့်ထားပြီး သီချင်းဟောင်းတစ်ပုဒ်ကို ညီးညူရင်း ထိုင်ခုံပေါ်ထိုင်နေဆဲ လာပါ သူငယ်ချင်း ခံစားချက်ကလေးများ ကုန်ပြီ ကုန်ခမ်းပြီ၊ နံရံမျက်နှာကြက်နဲ့ ကြမ်းပြင်အကြား ဒီအခန်းထဲက အပြင်မထွက်လိုဘူး… ကိုယ်ခန္ဓာ ကြွေမှာကိုစိုး….အိုး ဟိုဟိုး…နင်းထားတဲ့ ကြမ်းပြင် ကျွံသွားမလား…”
ထိုအချိန်မှာပဲ သူငယ်ချင်းက ရောက်လာပါသည်။ သူငယ်ချင်းသည် တစ်စုံတစ်ရာကို စိတ်ပျက်နေ သော ပုံစံပေါက်နေသည် ထင်သည်။ “ကိုယ်နဲ့တော့ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေတာတော့လည်း မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့ကိစ္စတွေက အတော်စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းတယ်ဗျာ” ဟု စကားကို စပါသည်။ ဒါပေါ့ဗျာ တစ်ခါတစ်ခါမှာ ဘ၀မှာ ဒီလိုပါပဲဟု သူက အလိုက်သင့် စီးမျှောပေးလိုက်ရပါသည်။ သူငယ်ချင်းသည် စကားကို ဒီလိုပဲ အဆက်အစပ်မဲ့စွာ ပြောတတ်သည်။ တစ်ခါတရံမှာတော့ စိတ်ညစ်စရာအကြောင်းတွေ ပြောနေရတာကိုပဲ သဘောကျချင် ကျနေတတ်သူ ဖြစ်သည်။
“ခင်ဗျားပဲ စဉ်းစားကြည့်ဗျာ၊ ဘယ်သူဆိုးသလဲဆိုတာ၊ နှစ်ယောက်လုံးကတော့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း ချည်းပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီကိစ္စမှာတော့ ဒီကောင်ဆိုးတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိတယ်။ မဖြစ်ခင်က ကျွန်တော်ထိန်းပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ မရဘူးဗျာ ၊ ဒီကောင် တော်တော်ဆိုးတယ်။ ဟော အခုတော့ ကွဲကြပြီ၊ ဒီမှာ ကောင်မလေးက ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ ကျန်ခဲ့ရပြီ။ ဟိုကောင်ကတော့ နောက်တစ်ယောက်နဲ့ စိတ်ပျက်ပါတယ်ဗျာ” ဟု ပြောနေသောအခါ သူသည် အလိုက်သင့် အင်း အဲ လုပ်ကာ ခေါင်းညိတ် ခေါင်းခါ လုပ်နေရသည်။
← ဖိုးရွှေညီမှိုင်း ● ရာဇဝင်​
ဝင်းနန္ဒာ ● တရုတ်မယားအဖြစ် ရောင်းစားခံ မြန်မာအမျိုးသမီးများအရေး ကုလက အစိုးရအဖွဲ့များကို ဖိအားပေးပါ – HRW →